Imbeko - SANXIA
Iimbasa kunye nempumelelo yeSanxia kule minyaka idlulileyo
I-Sanxia ithatha uyilo lweshishini njengenxalenye ekhokelayo, ngokuqhubekayo iphucula ukusebenza kunye nenqanaba lobuhle beemveliso. Iqela layo uyilo, kwaye isebenzisane abayili ezaziwayo-kakuhle ekhaya nakumazwe aphesheya ukuphuhlisa iimveliso, ukusuka kuyilo, imveliso ngumngundo kwimveliso, kwaye unamalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezu kwama-40 kunye neshumi lamalungelo abenzi.
Ukunyuka kokuyilwa kwamashishini kuye kwaba "sisandla sokutyhala" esinamandla sokuphucula iSanxia. Imveliso inexabiso, ubuchule abunalo ixabiso. Uyilo loyilo lweSanxia luzise isimanga kwintengiso, kwaye amandla ophuhliso kunye namandla aphuculwe kakhulu.
Nge "imbiza yentsimbi yokuphosa amatye" eSanxia, ​​inkampani yaphumelela iBhaso eliyiRed Red Design eJamani ngo-2020. Ihlabathi malibone umsebenzi wangaphakathi woyilo loyilo lweSanxia.
Ngelixa kusungulwa itekhnoloji kunye noyilo, uSanxia uhlala egxininisa kumgangatho wokuqala. Inkampani iseke inkqubo yolawulo lomgangatho epheleleyo, kwaye iimveliso zayo zidlulisile kuvavanyo lobungcali lwe-FDA kunye ne-LFGB.
ISanxia ineziko layo lokuvavanya elebhu. Kwi-2020, yanikezelwa ukuqinisekiswa kweKomiti yeSizwe yokuQinisekiswa kweSizwe yovavanyo lokuhambelana (CNAS). Inokuqhuba ngokuzimeleyo kuvavanyo lwemfundo ye-ironware enamel kitchenware. Ukusukela ngoko, i-Sanxia kitchenware inokuzimela ngokuzimeleyo ukuqinisekiswa nokuvavanywa kweemveliso, kwaye isebenzise i-CNAS Accreditation Mark, uphawu lwe-ILAC-MRA / CNAS, njl, ngaphandle kokuya kwiqela lesithathu.
Kwixesha elizayo, iSanxia izakuqhubeka nokuhambelana nezinto ezintsha kunye nophuhliso, inamathele kumgangatho wokuqala, yenze inkqubela phambili kwicandelo lokuvelisa izixhobo zokupheka, kwaye yenze impumelelo engaphezulu, kwaye yenze izixhobo zeekhitshi ezixabisekileyo nezikumgangatho ophezulu kwiintsapho zehlabathi.
I-Iron Iron Skillet, ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, i-Cast yentsimbi enqabileyo, Isinyithi se Iron Iron, xtreme Iron Skillet, uNamel Skillet,